Google Pixel2ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ John Legend ရဲ့ Music Video
9 Apr 2018 . 10:35 AM
All of Me သီချင်းနဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ John Legend ကို လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ အဲ့ဒီလိုပဲ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့ နေရာမှာ လက်ရှိအချိန်အထိ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ Google Pixel2ဖုန်းကိုလည်း ကြားဖူးကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး နာမည်ကြီး အဆိုတော်တစ်ယောက်နဲ့ အကောင်းဆုံးကင်မရာဖုန်းကို ပေါင်းစပ်ကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ?
စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ Music Video တွေ၊ ရုပ်ရှင်ဇတ်လမ်းတိုတွေ ရိုက်ကူးကြတာက အခုအချိန်မှာ မကြာမကြာတွေ့ရတတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် အများစုက Cover Song တွေ၊ မိနစ်ပိုင်းမျှသာ ကြာမြင့်တဲ့ ဇတ်လမ်းတိုတွေပဲ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် John Legend ကတော့ သူ့ရဲ့”A Good Night” နာမည်ပေးထားတဲ့ Music Video တစ်ခုလုံးကို Google Pixel2စမတ်ဖုန်းနဲ့ပဲ ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Google Pixel2စမတ်ဖုန်းဟာ အခုအချိန်မှာ ဓါတ်ပုံပိုင်းမှာပဲ အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းတစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ခံထားရပေမယ့် Video မှာပါ အရမ်းကောင်းမွန်တဲ့အဆင့်တစ်ခုအထိ ရိုက်ကူးနိုင်တာကို အခု Music Video မှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင် တကယ့် Video Camera နဲ့ ရိုက်ထားတာလား၊ စမတ်ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ထားတာလားဆိုတာကို မခွဲခြားနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။
ကဲ… John Legend ရဲ့ Google Pixel2ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ “A Good Night” Music Video ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
All of Me သီခငျြးနဲ့ နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ John Legend ကို လူတိုငျးသိကွမှာပါ။ အဲ့ဒီလိုပဲ ဓါတျပုံရိုကျတဲ့ နရောမှာ လကျရှိအခြိနျအထိ အကောငျးဆုံးလို့ သတျမှတျခံထားရတဲ့ Google Pixel2ဖုနျးကိုလညျး ကွားဖူးကွမယျလို့ ထငျပါတယျ။ အခုလိုမြိုး နာမညျကွီး အဆိုတျောတဈယောကျနဲ့ အကောငျးဆုံးကငျမရာဖုနျးကို ပေါငျးစပျကွညျ့လိုကျရငျ ဘယျလိုဖွဈသှားမလဲ?
စမတျဖုနျးတှနေဲ့ Music Video တှေ၊ ရုပျရှငျဇတျလမျးတိုတှေ ရိုကျကူးကွတာက အခုအခြိနျမှာ မကွာမကွာတှရေ့တတျတဲ့အရာတဈခုဖွဈပမေယျ့ အမြားစုက Cover Song တှေ၊ မိနဈပိုငျးမြှသာ ကွာမွငျ့တဲ့ ဇတျလမျးတိုတှပေဲ မြားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ John Legend ကတော့ သူ့ရဲ့”A Good Night” နာမညျပေးထားတဲ့ Music Video တဈခုလုံးကို Google Pixel2စမတျဖုနျးနဲ့ပဲ ရိုကျကူးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Google Pixel2စမတျဖုနျးဟာ အခုအခြိနျမှာ ဓါတျပုံပိုငျးမှာပဲ အကောငျးဆုံးစမတျဖုနျးတဈခုလို့ သတျမှတျခံထားရပမေယျ့ Video မှာပါ အရမျးကောငျးမှနျတဲ့အဆငျ့တဈခုအထိ ရိုကျကူးနိုငျတာကို အခု Music Video မှာတှခေဲ့ရပါတယျ။ ဘယျလောကျထိလဲဆိုရငျ တကယျ့ Video Camera နဲ့ ရိုကျထားတာလား၊ စမတျဖုနျးနဲ့ ရိုကျထားတာလားဆိုတာကို မခှဲခွားနိုငျလောကျအောငျပါပဲ။
ကဲ… John Legend ရဲ့ Google Pixel2ဖုနျးနဲ့ ရိုကျကူးထားတဲ့ “A Good Night” Music Video ကိုဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။